FAQs - Xuzhou Sanhe Otomatiki Kudzora Zvishandiso Co., Ltd.
Ehe, isu tinogona kugamuchira maitiro. Tiri nyanzvi R & D, kugadzirwa uye okutengesa fekitari. Tichagadzirisa zvigadzirwa maererano nezvinodiwa.
2, Zvigadzirwa zvako zvine hushoma hwehuwandu hwehuwandu hwezvinodiwa, asi chii chandinodadisa kana ndichingoda kutenga diki diki remasampuli? Zvakaita 1-2 zvidimbu?
Kazhinji, tinokubhadharisa muyero wekubhadhara uye mari yekutumira, asi usazvidya moyo, kana ukaisa odhiyo yepamutemo kwatiri gare gare, isu tinobvisa yemuenzaniso fizi kubva kuodha
otomatiki tembiricha kudzora, aquarium yedhijitari thermometer, thermometer yedhijitari, Incubator tembiricha controller, digital thermostat controller, thermostat tembiricha controller,